Kubatsira - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Seyakareba-yakasimbiswa yekupompa michina yekutengesa, kambani yedu yakave yakasimbiswa kune akati wandei maindasitiri zvitupa senge anotevera makiyi iwo.
Mune indasitiri yekupomba midziyo, kambani yedu yakamira kubva kune vamwe vayo nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
1. Yakaderera Kugadzira Mutengo uye Inonzwisisika Mutengo
Inowanikwa mumuzinda weChinese pombi yekugadzira indasitiri, guta reShijiazhuang, kambani yedu yakagadzika nyanzvi slurry chirimwa. Sezvo izvo zvinhu zvekupomba zvikamu, simbi inonakidzwa nemutengo wakaderera pano, yedu yekugadzira mutengo yakaderedzwa zvakanyanya. Ndosaka isu taigona kupa zvakavimbika pombi nemitengo inonzwisisika. Zvakare, petrochemical pombi yekugadzira base inowanikwa muDalian uye kune vazhinji vane ruzivo uye vashandi vehunyanzvi.
2. Yakavimbika uye Yakanaka Chigadzirwa
Semugadziri wemidziyo yekupompa, isu tinogara tichinamatira kuchisimboti chehunyanzvi uye mhando kuuya pekutanga. Pombi dzese dzakagadzirwa uye kugadzirwa nehunyanzvi hwepasirese hunyanzvi uye zvishandiso. Panguva imwecheteyo, isu tinopa zvigadzirwa zvakagadziridzwa zvinoenderana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu. Isu tinovimbisa kuti pombi yega yega yatinopa kwauri inonakidzwa nemhando yepamusoro uye nekuita kwakawanda.
3. Hunhu Kudzora
Kuti uve nechokwadi chekuti mapampu edu ekupomba akapihwa kwauri zvakakwana zvinogutsa zvaunoda, isu takagadzira systemic uye yakasimba kuomarara mhando yekugadzirisa. Isu tinogona kupa zvigadzirwa zvakave zvichisimbiswa kune iyo CE mucherechedzo, ISO9001 zviyero kana mamwe maindasitiri zviyero. Zvichakadaro, isu tinogona kupa mhando yekudzora zvinyorwa uye mushumo wakanangana newe kana zvichidikanwa, senge "yepanyama neyemakemikari pfuma mushumo wezvinhu zvepombi zvikamu zvikuru", "rotor balancing report", "hydrostatic test report" uye "pre-delivery delivery report" . Zvese mune zvese, isu tinotora ese maratidziro ehunhu kudzora zvakakomba, tichivimbisa kuti yega yekupomba unit kunakidzwa nehunhu hwakanaka uye hwakavimbika mashandiro.